Iwu nzuzo, Nchedo nke ikike nzuzo
Nzuzo bu ikike di nkpa ma nye ndi mmadu na ulo oru aka ichikota data ha. N'ihi mmụba nke iwu na ụkpụrụ European na mba na njikwa siri ike na nrube isi nke ndị nlekọta, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ enweghị ike ileghara iwu nzuzo anya n'oge a. Kpụrụ kachasị amara nke iwu na ụkpụrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ga-agbaso bụ Iwu Iwu Nchedo Data (GDPR)…
N'AGBAS OF OBI EGO?
Nzuzo bu ikike di nkpa ma nye ndi mmadu na ulo oru ohere ijikwa data ha.
> Oke ngwa na nlekọta
> Ndepụta ngwa ahịa na iwu nzuzo
> Iwu Nlekọta Data Nchekwa (GDPR)
N'ihi mmụba nke iwu na ụkpụrụ iwu nke European na mba na njikwa siri ike na nnabata nke ndị na-elekọta ọrụ, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ enweghị ike ileghara iwu nzuzo ugbu a anya. Ihe atụ kachasị mara nke iwu na ụkpụrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ga-agbaso bụ General Data Protection Regulation (GDPR) nke batara n'ime European Union dum. Na Netherlands, etinyerela iwu ndị ọzọ na GDPR Mmeju Iwu (UAVG). Isi nke GDPR na UAVG dabere n'eziokwu na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla na-ahazi data nke onwe ya kwesịrị iji nlezianya na nghọta doo anya.
Ọ bụ ezie na ime ka ụlọ ọrụ GDPR-proof gị dị ezigbo mkpa, ọ siri ike n'iwu. Ma ọ gbasara data ndị ahịa, data ndị ọrụ ma ọ bụ data sitere na ndị ọzọ, GDPR na-esetịpụ ihe achọrọ siri ike gbasara nhazi nke data onwe ya ma na-ewusi ikike nke ndị data haziri. Law & More Ndị ọka iwu maara banyere mmepe niile gbasara iwu nzuzo (na-agbanwe agbanwe). Ndị ọka iwu anyị na-abanye n'ụzọ ị ga - esi jiri data nke gị wee depụta usoro dị n'ime gị na nhazi data. Ndị ọka iwu anyị na-enyochakwa ókè ụlọ ọrụ gị nwere nhazi nke ọma dịka iwu AVG dị na ya yana ihe ndozi enwere ike ịdị. N'ụzọ ndị a, Law & More nwee obi uto inyere gi aka ime ma debe nzukọ gi GDPR.
Site na ntinye nke AVG, iwu akwadoro. Companylọ ọrụ gị akwadoro maka nke a?
Onye Nche Nche Data
Anyị na-enyere gị aka ịhọpụta Onye Nchedo Data
Nnyocha Mmetụta Nchebe Data
Anyị nwere ike ịme nyocha iji chọpụta ihe egwu dị na njikwa data gị
Kedu data ụlọ ọrụ gị na-arụ? Ọ na-arụ ọrụ na AVG? Anyị nọ n’ọrụ gị
“Mgbe okwu mmeghe ya
ozugbo ahụ bịara doo m anya
na Law & More nwere
atụmatụ doro anya nke ime ihe ”
Oke ngwa na nlekọta
GDPR metụtara ndị otu niile na-ahazi data nkeonwe. Mgbe ụlọ ọrụ gị nakọtara data nke mmadụ nwere ike ịmata, ụlọ ọrụ gị nwere GDPR. Ọzọkwa, a na-ahazi data nkeonwe mgbe, dịka ọmụmaatụ, a na-edobe ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ gị, edenye aha ndị ahịa na ndị ahịa ma ọ bụ mgbe agbanwee data na nlekọta ahụike. Also nwekwara ike iche maka ọnọdụ ndị a: ịme ihe omume ahịa ma ọ bụ tụọ ma ọ bụ ịdebanye aha onye ọrụ ma ọ bụ iji kọmputa. N'iburu n'uche nke a dị n'elu, ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume na ụlọ ọrụ gị ga-agbaso iwu nzuzo.
Na Netherlands, ụkpụrụ bụ isi bụ na mmadụ ga-enwerịrị ike ịdabere na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iji lekọta data ha nke ọma. E kwuwerị, n'ime ọha anyị ugbu a, digitization na-arụ ọrụ dị oke mkpa ma na-agụnye ịhazi data n'ụdị dijitalụ. Nke a nwere ike ibute nnukwu ihe egwu gbasara ichebe nzuzo anyị. Ọ bụ ya mere onye na-ahụ maka nzuzo Dutch, ndị Dutch Data Security Authority (AP) ji nwee ikike na ikike mmanye. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị anaghị erubere iwu GDPR n'ọrụ, mgbe ahụ ọ ga - enye iwu ọsọ ọsọ maka ịkwụ ụgwọ ntaramahụhụ oge ma ọ bụ ezigbo ụgwọ, nke nwere ike iru ihe ruru nde euro iri abụọ. Na mgbakwunye, na ihe eji akpachapụghị anya na data nkeonwe gị, ụlọ ọrụ gị ga-eburu n'uche nkwupụta ọ bụla nwere ike ịme mmebi yana omume mmegwara site n'aka ndị ọ metụtara.
Ndepụta ngwa ahịa na iwu nzuzo
Iji gbochie nsonaazụ ma ọ bụ usoro ndị dị otú ahụ site n'aka onye nlekọta ọrụ, ọ dị mkpa ka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwee iwu nzuzo iji soro GDPR. Tupu ichoputa iwu nzuzo, ọ dị mkpa ịkọpụta ihe ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị na-eme na ọnọdụ nke nzuzo. Ya mere Law & More achịpụtala usoro nke usoro a:
• Kwụpụ 1: Chọpụta data nke ị na-eme
• Kwụpụ 2: Kpebie ebumnuche na ntọala maka nhazi data
• Kwụpụ 3: Kpebisie ike etu esi enwetacha ikike nke ihe ndị metụtara data
• Kwụpụ 4: Nyochaa ma etu esi arịọ, nnata ma denye aha
• Kwụpụ 5: Kpebie ma iwu ji gị ka ị rụọ Nnyocha Ọnọdụ Mmetụta Nchedo Data
• Kwụpụ 6: Kpebie ma ịhọpụta Onye na-ahụ maka nchekwa data
• Kwụpụ 7: Kpebie otú ụlọ ọrụ gị si emeso ihe gbasara mgbapụta data na ọrụ kwesịrị ịkọ
• Kwụpụ 8: Lelee nkwekọrịta nhazi gị
• Kwụpụ 9: Kpebie onye nlekọta nke nzukọ gị
Mgbe i mechara nyocha a, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta nsogbu dị na imebi iwu nzuzo na-ebilite n'ime ụlọ ọrụ gị. Enwere ike ịtụ anya nke a na iwu nzuzo gị. You na-achọ nkwado na usoro a? Biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọka iwu anyị bụ ndị ọkachamara na ngalaba nke iwu nzuzo na enwere ike inyere ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ aka n'ọrụ ndị a:
• v na-atụ aro na ịza ajụjụ gbasara iwu gị: dịka ọmụmaatụ, olee mgbe esemokwu dị na data, oleekwa otu i si emeso ya?
• Nyochaa njikwa data gị dabere na ebumnuche na ụkpụrụ GDPR yana ịchọpụta ihe egwu dị iche iche: ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị na-agbaso GDPR yana usoro iwu ị ka kwesịrị ịme?
• p na-akwadebe ma na-enyocha akwụkwọ, dị ka iwu nzuzo gị ma ọ bụ nkwekọrịta processor.
• duct na-eme Nnyocha Mmetụta Nchedo Data.
• Inyere aka na usoro iwu na itinye aka na usoro nke AP.
Iwu Nlekọta Data Nchekwa (GDPR)
• N'oge a, iwu nzuzo na-enwe mgbanwe dị mkpa nke na-esite na mmejuputa GDPR. Site na nguzobe GDPR, European Union dum ga-edobere iwu nke nzuzo. Nke a na - emetụta ụlọ ọrụ, ebe ọ bụ na ha ga - emerịrị ihe chọrọ ihe gbasara nchedo data. GDPR kwalite onodu nke ihe omuma banyere data site na inye ha ikike ohuru na iwusi ikike ha ike. Ọzọkwa, òtù ndị na-ahazi data nke onwe ga-enwe ọtụtụ ọrụ. Ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ijikere maka mgbanwe a, karịa karịa ebe ọ bụ na ntaramahụhụ maka nrube isi na GDPR ga-abụkwa ihe siri ike.
Ndụmọdụ ị chọrọ maka mgbanwe maka GDPR? Want chọrọ ka emee nlele nnabata, iji jide n'aka na ụlọ ọrụ gị na-agbaso ihe ndị achọrọ sitere na GDPR? Ka ị na-eche na nchebe nke onwe gị data ezughị ezu? Law & More nwere nnukwu ihe omuma banyere iwu nzuzo ma gha enyere gi aka ịhazi ulo oru gi n 'usoro GDPR.